भ*र्खरै हेर्नु ज्ञानेन्द्र शाहीले गरे अ'हिले सम्मकै ठु'लो खु* ला'सा Gyanendra Shahi - Onlines Time
सिभिल ठेकेदारका ५०० जना जना मजदुर र कर्मचारीले राहुघाटमा काम गरिरहेका छन् । २०७४ मंसिर ५ गते रु. छ अर्बमा सम्झौता गरेको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोशियट्सले २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो । यो आयोजनाको सुरुङ, पहुँचमार्ग, विद्युतगृह र बाँध निर्माण स्थल रघुगंगा गाउँपालिका हो । भारतीय एक्जिम बैङ्कको ४४ मिलियन डलर सहुलीयत ब्याजदरको ऋणमा राहुघाट निर्माण हुन लागेको हो ।
४५ महिनाको ठेक्का अवधि भएको आयोजनाको ३० महिना पुरा भएको छ । आयोजनाको छ किलोमिटर २०० मिटर सुरुङ र एक किलोमिटर पेनस्टक पाइप रहने छ । एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानीकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले पनि प्रारम्भिक चरणको काम गरिरहेको छ । कम्पनीको अवधारणा र इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपीसी) प्रारुपमा राहुघाट बनाउन लागिएको हो । २०७३ मा स्थापना भएको रघुगंगा हाइड्रो लिमिटेड विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो । गत फागुनमा पिप्लेमा आवास र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि १० वटा भवन निर्माण सकिएको थियो ।
अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रबिधिको बाँध रहने यस आयोजनाले सन २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित २०७५ चैतमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । २०७२ मा पुरानो ठेक्का तोडेपछि रोकीएको राहुघाटको सुरुङ खन्ने काम चार वर्षपछि २०७६ असार ७ गतेबाट सुरु भएको थियो । राहुघाट, म्याग्दी र आसपासका खोलाहरुमा निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युतलाई केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न रघुगंगा गाउँपालिका–३ अम्बाङमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण सुरु भएको छ ।
विद्युत विकास विभागका अनुसार म्याग्दी जिल्लाभर ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ जलविद्युत आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । ३५३.८ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । ३४६.०३ मेगावाट क्षमताका ६ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन् । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेको छ । ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रिखोलाले आगामी जनवरी महिनाभित्र विद्युत उत्पादनको तयारी गरेको छ ।
Prevभर्खरै यस्तो फैसलापछि मच्चि*यो खैला*बैला, रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकै*दको फैस’ला
Nextश्री कृष्णका डु-ब्लिकेट प्रकश चन्दले यस्तो काम गर्छन, के फिल्म खेल्ने तयारी हुदैछ त ? हेर्नुहोस्